Global Voices teny Malagasy » Tatitra avy amin’ny Fihaonan’ny Bilaogera Jôrdaniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2018 17:46 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, Ejipta, Jordania, Mediam-bahoaka
Fihaonan'ny Bilaogera Jôrdaniana Androany Alina
Tsy fantatrao mihitsy izay olona hipoitra any amin'ny fihaonanà bilaogera. Tsy vitan'ny hoe lasa sasany amin'ireo bilaogera tsara indrindra ao Jôrdania fotsiny ny fihaonan'ny bilaogera Jôrdaniana – ezaka iraisan'ny Jordan Planet /Global Voices – fa lasa kintana goavana avy ao Bahrain sy Egipta ihany koa. I Ammar Ibrahim , i Roba Assi an'ny And Far Away , i Nader Shnoudi , i Jad Madi , i Ahmad Humeid an'ny 360east , i Hind Sabanekh , i Rai'da Al-Zu3bi, ary i Isam Bayazidi  mpamorona ny Jordan Planet, no nisolo tena an'i Amman (renivohitr'i Jôrdania). Nody avy nitsidika an'i Utah kosa ilay Jôrdaniana Iyas Masannat  sy ny vadiny. Nisolo tena an'i Egipta an-databatra i Mohammed Sameer , mpikatroka mafana fo mampiasa loharano misokatra, ary nitondra fomba fijerim-paritra tao amin'ny vondrona kosa i Haitham Sabbah , bilaogera Jôrdaniana tranainy mipetraka ivelan'ny tanindrazana izay manoratra bilaogy avy ao Bahrain.
Iray tamin'ireo lohahevitra lehibe indrindra noresahina ny famokaran'i Haitham bilaogy marobe izay tena mampihaiky – rehefa nanontany bilaogera mba hanoratra ny rohin'ny bilaogin-dry zareo aho, nanoratra bilaogy enina i Haitham – anatin'izany ny palestineblogs.com , ny arablogger.com  ary ny NoToTerrorism.com  – talohan'ny niatoany ary nitenenany fa “ireto angamba no lehibe indrindra”. Nampisalasala be ny fananan'i Haitham asa “tena izy”, mandra-pamoahany karatra ara-pandraharahàna, sy nanazavàny fa miasa valo ora izy, manoratra bilaogy mandritra ny 12 ora ary matory adiny efatra.
Nisarika ny saina ihany koa ireo lohahevitra matotra kokoa, toy ny fahitàna fa saika voafetra ho an'ireo mponina mampiasa teny roa ao Amman ihany ny fanoratana bilaogy ary tsy niparitaka ivelan'ny renivohitra mankany amin'ireo tanàndehibe faharoa sy ireo faritra ambanivohitra. Mahaliana ny ankamaroan'ireo bilaogera Jôrdaniana ny fikarakaràna ezaka fanairana ireo faritra ambanivohitra amin'ny alàlan'ny foiben'ny vondrompiarahamonina ahafahana miditra Aterineto, mampirisika ny olona hanoratra bilaogy momba ireo hetsiky ny vondrompiarahamonina, izay mety hampiasa bilaogy an-tsary sy feo mba hiantefan'ny ezaka eny amin'ireo mpandray anjara tsy dia mahay manoratra sy mamaky teny. Noresahiko fohifohy ny fomba nanampian'ny torolàlana momba ny fanoratana bilaogy natolotr'i Hossein Derakshan  tamin'ny teny Farsi hitarika hetsipanovàna ny bilaogy tao Iran, ary nisy fahatsapana iraisana fa ilaina ny fampahafantarana tsara amin'ny teny Arabo ny fomba sy ny antony hanoratana bilaogy, mifantoka amin'ireo Jôrdaniana ivelan'i Amman. Hahaliana tokoa ny hijery ny vokatr'ity adihevitra ity anatin'ny volana vitsy ho avy.
Nandritra ity tsidika tao Jôrdania ity, voakapoky ny halalin'ny maha firenena mampifandray an'i Amerika Avaratra sy Eoropa ao Afovoany Atsinanana an'i Jôrdania aho. Feno mpanao fivahinianana masina ho any Lameka ny fiaramanidina nisy ahy; feno manampahaizana momba ny fiarovana ho any Bagdad kosa ny trano fivahinianana nitoerako. Haingana teo dia lasa toerana malaza fanaovana fivoriambe mampivondrona ny faritra amin'izao tontolo izao i Amman. Ary eo amin'ny tendron'io tranga io ny bilaogera Jôrdaniana. Manoratra amin'ny teny Anglisy ny ankamaroan'ireo bilaogera teo amin'ny latabatra, mikendry mpamaky maneran-tany. Ary maro tamin'izy ireo no nanaiky fa manoratra mazava tsara mba hiadiana amin'ireo endrik'i Afovoany Atsinanana diso tsotsorina any anatin'ny haino amanjery mahazatra, mba hanoherana ireo fitsaràna faobe ny tontolo Arabo amin'ny firesahana momba ireo antsipirian'ny fiainana andavanandro. Manan-karena bilaogera mpampifandray i Jôrdania, ary mbola manan-karena kokoa isika rehetra ambiny noho izany.
Isaorako ireo namako rehetra ao Jôrdania, Egipta ary Bahrain izay niaraka tamiko tao amin'ny Wild Jordan androany alina, noho ny fanatrehany sy ny fandraisany anjara tanatinà tetikasa maneran-tany hahatonga ny tontolo hahaliana kokoa, ho saro-takarina kokoa ary horaisina am-po kokoa. Fisaorana manokana ho an'i Isam Bayazidi noho ny asa-mafy nataony tanatin'ny fikarakaràna ny fihaonana androany alina. Ary manantena izahay fa hahita feo Jôrdaniana maro kokoa ao anatin'ny Global Voices atsy ho atsy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/25/118323/
 Jordan Planet: http://www.jordanplanet.net
 Ammar Ibrahim: http://blog.ammar_ibrahim.com
 And Far Away: http://andfaraway.net
 Nader Shnoudi: http://nadershnoudi.blogspot.com
 Jad Madi: http://easyhttp.com/jad
 Hind Sabanekh: http://easyhttp.com/hindsabanekh
 Isam Bayazidi: http://isam.bayazidi.net
 Iyas Masannat: http://jameed.net
 Mohammed Sameer: http://wwww.foolab.org
 Haitham Sabbah: http://sabbah.biz
 Hossein Derakshan: http://hoder.com